नागरिक अभियन्ताले राजनीति बगार्ने ?
नागरिक अभियन्ता, नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन खूब चर्केको छ । जब जब सत्ता परिवर्तन हुने अवस्था आउँछ, साखुल्ले पल्टिन र हामीले परिवर्तन ल्यायौं भनेर देखाउन नागरिक समाज सडकमा तमासा देखाएर उफ्रिन्छ ।
नागरिक समाज भनेको के हो ? नागरिक समाजले गर्नुपर्ने काम र निभाउनु पर्ने कर्तव्य के हो ? नागरिक समाजमा कस्ता कस्ता ब्यक्तिहरू हुनुपर्छ ? नागरिक समाजले उठाउने विषयहरू के के हुनसक्छन् ?
नेपालमा केही पनि छैन । स्वघोषित नागरिक समाज छ, त्यो समाजमा आइएनजीओदेखि पार्टीका सदस्यहरू रहेका देखिन्छन् । उनीहरू नागरिकका होइन, राजनीतिक मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू संविधानका व्याख्याताजस्ता पनि देखिन्छन् । उनीहरू अदालतका न्यायाधीशभन्दा माथिजस्ता लाग्छन् । समाजका ठेकेदारका हैसियतका नाराबाजी, प्रदर्शन पनि गर्छन् ।
नागरिक अभियन्ताहरू सरकारजस्तो देखिन्छ । प्रशासकजस्तो देखिन्छ । अभियन्ता कम र बिद्रोही बढी लाग्छन् । त्यसैले त नागरिक अभियन्ताहरू यतिबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माँगिरहेका छन् । राजनीति त पार्टीहरूले गर्नुपर्ने हो । राजनीति नागरिक अभियन्ताहरूको काम होइन ।
नागरिक अभियन्ताले नागरिकका कुरा कहिले उठाए ? नागरिकहरू किन बलात्कार, हत्या, महगी, लूट, कुशासनबाट पीडित भइरहेका छन् ? नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा किन पाइरहेका छैनन् ? नागरिकका कुन कुन आवाज, अपेक्ष ा सरकारले सुनेन, ती आवाजलाई नागरिक अभियन्ताहरूले उजागर गरिदिनुपर्ने हो, सरकारलाई झकझक्याइदिनुपर्ने हो र नागरिकका आवश्यकता, गुजाराका विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार हुन दबाब दिनुपर्ने हो ? नागरिक अभियन्ता नागरिकका विषयमा बोल्दैनन्, सुत्छन् र अमुक पार्टीको आन्दोलनलाई सघाउ पु¥याउनु पर्ने भयो भने सडकमा उत्रन्छन्, नारा जुलुस गर्छन् । बालुवाटार घेर्छन्, सडकमा प्रदर्शन गर्छन् ।
लाग्छ, नागरिक आन्दोलन भनेको सत्ता परिवर्तनका लागि राजनीति बगार्नु, पार्टीलाई सहयोग गर्नु हो ।
नागरिक अभियन्ताको काम भत्काउनु होइन । तोडफोड गर्नु, हिंसात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि होइन । आफूभित्रका, पार्टीका कुण्ठालाई वकालत गर्नु कसरी नागरिक अभियन्तालाई सुहाउँछ र ?
अहिले सडकमा नागरिक अभियन्ताका नाममा जे देखिएको छ, त्यो कसैले उचालेर उफारेको हो भन्ने जो कसैले भन्नसक्छन् । गालीगलौजको स्तरमा नागरिक अभियन्ता उत्रनु भनेको गलत तरिका हो । पार्टीहरूले गलत गर्दा सच्चिन र सुधारिन प्रेरित गर्नुपर्ने नागरिक समाज यतिबेला हिंसात्मक रूपमा उत्रिएको पनि देखिन्छ । कुनै पनि अतिवादी सोच राख्नु नागरिक अभियन्ताका लागि सुहाउँदैन ।